Isbaheysiga Muqtada al-Sadr oo ku Guuleystay doorashada wadanka Ciraaq | Kalshaale
Isbaheysiga Muqtada al-Sadr oo ku Guuleystay doorashada wadanka Ciraaq
May 15, 2018 - Aragtiyood
Nairobi (Kalshaale) Isbaheysiga uu hogaamiyo wadaadka shiicada ah ee sida aadka ah uga soo horjeeda Mareykanka Muqtada al-Sadr ayaa u muuqda inuu ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalka Iraq.
Iyadoo inta badan la tiriyay codadka la dhiibtay, ayuu Isbaheysiga Al-Sadr uu hogaaminayaa ilaa iyo lix gobol. Waxaa kusoo xiga xisbiga uu madaxda u yahay Hadi al-Amiri oo madax u ah koox maleeshiyo ah.
Ra’isulwasaaraha hadda talada haya Haider al-Abadi, oo ay taageerto dowladda Mareykanka ayaa ka codsaday dadka reer Ciraaq in ay ixtiraamaan natiijada kama danbeysta ah ee kasoo baxda doorashada.
Boqolaal ka mid ah taageerayaasha Muqtada Al-Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada Baghdad kadib marki lagu dhawaaqay qeyb ka mid ah natiijada.
Qaar ka mid ah dadka ayaa ku qeylinayay bog cusub ayaa u furmay dadka Ciraaq, halka kuwo kalana ay dhahayeen waa dhamaadkii musuqmaasuqa.